» ‘अमेरिकीन बच्चा’ जन्मिएपछी, परिवारलाई, लाग्यो शंका, सत्य थाहा पाउदा ,उडायो होश ! ‘अमेरिकीन बच्चा’ जन्मिएपछी, परिवारलाई, लाग्यो शंका, सत्य थाहा पाउदा ,उडायो होश ! – हाम्रो खबर
“बिहारको भागलपुरको जवाहरलाल नेहरू अस्पतालमा एउटा अनौठो बच्चाको जन्म भएको छ। यो बच्चा को रंग पूरै खैरो छ र यसको टाउको को कपा , आखिभौ समेत खैरो र दुधिलो सेतो छ। बच्चालाई देखेर अस्पतालमा उपस्थित डाक्टरहरु र नर्सहरु पनि सबैजना छक्क परे।”
“वास्तवमा मुगेर कि एक महिला लाई अस्पतालमा राती भर्ना गरिएको थियो । उनको शरीरमा मात्र ६ ग्राम हीमोग्लोबिन भेटिएको कारण त्यहाँका कनिष्ठ डाक्टरहरुले ती महिलालाई आज राती यहि सुत्नु पर्ने बताए। त्यो बच्चा राती ठीक १२:०० मा जन्मेको थियो र त्यो बच्चाको रुप देखेर वरपरका सबैजना छक्क परे। त्यो बच्चालाई देखेर त्यहाँका मानिसहरु र उसको परिवार यति खुसी छन् कि सबैजना उनीसंग सेल्फी लिन आउँदैछन्।”
“बच्चा को रंग पूरै दूधिया सेतो भएको कारण, यो एक यूरोपीयन बच्चा हो जस्तो देखिन्छ। डाक्टरहरुका अनुसार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कलेजमा खैरो रंगको बच्चा जन्मेको यो पहिलो घटना हो। यदि हामी बच्चा को यो रंग को कारण को बारे मा कुरा गर्छौं, तब त्यहाँ सबै को शरीर मा एक वर्णक छ, जसको कारण उनको शरीर को रंग यो रंगमा परिबर्तन हुन सक्छ । डाक्टरहरुका अनुसार यस्ता केसहरु शरीरमा अल्बिनोको कमीका कारण उत्पन्न हुन्छन्।”
“मेलानिन नामक एक तत्त्वो मानव शरीर मा उपस्थित छ, जसको कारण शरीर को रंग को निर्णय गरीन्छ, तर यो वर्णक बनाउन को लागी, अल्बिनो को आवश्यकता छ। यदि शरीर मा अरबी संख्या को कमी छ, तब शरीर को रंग सेतो हुन्छ। यो युरोपेली देशहरुमा सामान्य छ, तर एशिया मा यो एक विकार मानिन्छ।”
“भारत र यसको वरपरका देशहरुमा, गर्मी धेरै छ, जसको कारण हाम्रो शरीर तातो घाम को सामना गर्न को आदी हुन्छ। तर त्यस्ता रंगका मानिसहरुलाई तातो घाममा लामो समय सम्म उभिन धेरै कठिनाईहरुको सामना गर्नु पर्छ। यस्ता बच्चाहरुमा क्यान्सर हुने खतरा पनि धेरै गुणा बढ्छ। यद्यपि हाम्रो देशमा यस्ता केसहरु लाखौ मा एक हुन्छन।”
“सामान्यतया यो देखिएको छ कि यदि एक बच्चा अन्य बच्चाहरु बाट फरक फरक छ, तब उसको वरपरका मानिसहरु उसको मजाक बनाउन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई मानसिक तनाव पनि हुन सक्छ। यसैले डाक्टरहरु सधैं सुझाव दिन्छन् कि समाज मा कुनै पनि मानव दुर्व्यवहार वा यस्ता बच्चाहरु को मजाक गर्नु हुँदैन। यदि समाजले यसो गर्यो भने यो बच्चा मा नराम्रो असर पर्न सक्छ।””